↑ (2004) The Formation of Stars. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 3-527-40559-3။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြယ်ပေါက်စ&oldid=379805" မှ ရယူရန်
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၇၊ ၁၆:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၇၊ ၁၆:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။